Taf'Ita | Asa sosialy : Nanatontosa iraka ny mpianatra ao amin’ny Deparitemanta Taf’Ita - Taf'Ita
SAMIS-ESIC, St Michel Amparibe
Lot ID 73 Amparibe
+261(0) 20 22 333 09
Asa sosialy : Nanatontosa iraka ny mpianatra ao amin’ny Deparitemanta Taf’Ita
La rédaction TafitaLa rédaction Tafita
Niara nirona ny mpianatra ao amin’ny deparitemanta Taf’Ita, omaly, nanatontosa ny iraky ny sekoly. Niorimpaka hanasoa ny Akany Avoko.
Ny alarobia, 16 febroary 2022, lasa teo, teny Faravohitra. Nandeha nanatanteraka asa sosialy ireo mpianatra mpanao gazety an-tsoratra. « Ny Akany Avoko » no nosafidina hanaovana izany. Natao io hetsika io, satria tsy maintsy manao izany avokoa ny isaky deparitemanta. Izany no filazana nataon’ny talen-tsekoly. Efatra herinandro no anaovana izany.
Nanomboka tamin’ny 02 ora tolak’andro ny fotoana. Tsy tonga dia nanao ny asa ny mpianatra fa nisy solotena iray tamin’ireo mpanabe tao amin’ny akany nandray. Nitantara ny antom-pisian’ny akany no nanokafana izany.
Tsara ho fantatra fa niforona tamin’ny 1963 ny akany. Ny zaza mbola tsy ampy taona nanao fahadisoana ka tokony nigadra no alefa eny. Ny tanjona amin’izany, hanomezana fanantenana sy hanarenana indray ny fiainanan’ireo zaza. Tsy izany ihany anefa fa misy koa ny kamboty taizana eny. Misy fetrany ny fipetrahan’ireo ankizy ireo ao. Miankina amin’ny sazy nomen’ny fitsarana azy izany. Rehefa vita ny saziny, alefa mody ilay ankizy. Mianatra toy ny zaza rehetra izy ireo. Tsy voafaritra mazava ny isan’ny ankizy ao fa miovaova, satria misy ny miditra ary misy ny mody isanandro. 67 isa ireo ankizy ao amin’izao.
Naharitra adiny iray teo ny fanazavana nentin’ilay mpanabe tao amin’ny Akany avoko. Rehefa vita ny fampahafatarana rehetra, nentiny nitsidika ny trano hipetran’ireo ankizy. Malalaka ny trano ipetrahan’ireo ankizy ao. Tsy dia misy mahaory azy ireo loatra fa mitovy amin’ny ankizy rehetra taizain’ny fianakaviana ihany.
Vita ny fitsidihana ny trano, nody avokoa ny mpianatra satria mbola fanokafana ihany iny voalohany iny. Amin’ny fotoana manaraka manomboka ny asa amin’izay ireo mpianatra ao amin’ny deparitemanta Taf’Ita.
Imbiki Herilaza : Démission acceptée par le PRM
21 Febroary : andro iraisam-pirenena ho an’ny Tenindreny
© 2022. Tafita